ဘိုငျယနျမွူးနဈ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ အကျသလကျတီကိုအသငျးတှမှောကစားခဲ့သူ ခရိုအေးရှားနာမညျကြျောဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီးမာရီယိုမနျဇူကဈဟာ အသကျ(၃၅)နှဈအရှယျမှာ ဘောလုံးသမားဘဝကနအေနားယူသှားပွီဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက ခရိုအေးရှားအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျဗိုလျလုပှဲအထိတကျရောကျနိုငျအောငျစှမျးဆောငျခဲ့သူ မနျဇူကဈဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီဝကျမှာ ကာတာကလပျ Al-Duhail အသငျးကနေ အစေီမီလနျအသငျးဆီပွောငျးရှခေဲ့ပွီး
ဒဏျရာပွဿနာတှနေဲ့ခွစှေမျးမပွနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အစေီမီလနျအသငျးက သူ့ကို စာခြုပျသကျတမျးမတိုးခဲ့ဘဲ ရာသီကုနျမှာလမျးခှဲခဲ့သလို (၄)လနီးပါးအကွာမှာတော့ မနျဇူကဈက ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
မနျဇူကဈဟာ ကလပျအသငျးကစားသမားဘဝမှာ ကွီးမားတဲ့အောငျမွငျမှုတှရေယူနိုငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီတုနျးက ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျး ဘှနျဒဈလီဂါ၊ ဂြာမနျဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျစတဲ့ဖလား(၃)လုံးရာသီမှာ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့တဲ့အပွငျ
အကျသလကျတီကိုအသငျးနဲ့ စပိနျစူပါဖလား၊ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့လညျး စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလားတှေ ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားယူဖို့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ပတျသကျလို့ မနျဇူကဈက သူ့ Instagram မှာ “မာရီယိုလေးရေ . .မငျးဘဝမှာ ဘောကနျဖိနပျတှေ ပထမဆုံးဝတျဆငျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ မငျးရဲ့ကစားသမားဘဝက ဒီလောကျအထိအောငျမွငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားမှာမဟုတျဘူး။
ထိပျတနျးအဆငျ့ပွိုငျပှဲတှမှော ဂိုးတှသှေငျးယူခဲ့သလို ထိပျသီးကလပျတှရေဲ့ဂြာစီဝတျဆငျပွီးတော့ အဓိကဆုဖလားတှအေမြားကွီးရယူနိုငျခဲ့တာမဟုတျလား။
ဝတျခဲ့ရတဲ့ဂြာစီတှထေဲမှာ ဂုဏျယူစရာအကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးဂြာစီနဲ့အတူ သမိုငျးတှငျမယျ့မှတျတမျးကောငျးတှလေညျး ရေးထိုးနိုငျခဲ့သေးတယျလေ။
မငျးရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝတဈလြှောကျမှာ ခွစှေမျးတိုးတကျအောငျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတှရှေိခဲ့သလို မငျးကလညျး အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျပေးဆပျဖို့ဆန်ဒပွငျးပွတာကွောငျ့ အခုလိုအောငျမွငျခဲ့ရတာပေ့ါ။
အခုအခြိနျကတော့ အဲဒီဖိနပျတှကေို ဗီရိုထဲမှာထညျ့သိမျးရမယျ့အခြိနျရောကျလာပွီလေ။
ဘောလုံးဆိုတာက မငျးဘဝမှာ အမွဲတမျးအမှတျရနမေယျ့အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ ဘဝသဈတဈခုစတငျလြှောကျလှမျးရဖို့အတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားလိုကျပါတော့”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဘောလုံးသမားဘဝကို လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခရိုအေးရှားဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီးမန်ဇူကစ်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အက်သလက်တီကိုအသင်းတွေမှာကစားခဲ့သူ ခရိုအေးရှားနာမည်ကျော်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီးမာရီယိုမန်ဇူကစ်ဟာ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ်မှာ ဘောလုံးသမားဘဝကနေအနားယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက ခရိုအေးရှားအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဗိုလ်လုပွဲအထိတက်ရောက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့သူ မန်ဇူကစ်ဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီဝက်မှာ ကာတာကလပ် Al-Duhail အသင်းကနေ အေစီမီလန်အသင်းဆီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အေစီမီလန်အသင်းက သူ့ကို စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးခဲ့ဘဲ ရာသီကုန်မှာလမ်းခွဲခဲ့သလို (၄)လနီးပါးအကြာမှာတော့ မန်ဇူကစ်က ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မန်ဇူကစ်ဟာ ကလပ်အသင်းကစားသမားဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီတုန်းက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း ဘွန်ဒစ်လီဂါ၊ ဂျာမန်ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်စတဲ့ဖလား(၃)လုံးရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့အပြင် အက်သလက်တီကိုအသင်းနဲ့ စပိန်စူပါဖလား၊ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့လည်း စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလားတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ မန်ဇူကစ်က သူ့ Instagram မှာ “မာရီယိုလေးရေ . .မင်းဘဝမှာ ဘောကန်ဖိနပ်တွေ ပထမဆုံးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မင်းရဲ့ကစားသမားဘဝက ဒီလောက်အထိအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ ထိပ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့သလို ထိပ်သီးကလပ်တွေရဲ့ဂျာစီဝတ်ဆင်ပြီးတော့ အဓိကဆုဖလားတွေအများကြီးရယူနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်လား။
ဝတ်ခဲ့ရတဲ့ဂျာစီတွေထဲမှာ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းဂျာစီနဲ့အတူ သမိုင်းတွင်မယ့်မှတ်တမ်းကောင်းတွေလည်း ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သေးတယ်လေ။ မင်းရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာ ခြေစွမ်းတိုးတက်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့သလို မင်းကလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေးဆပ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြတာကြောင့် အခုလိုအောင်မြင်ခဲ့ရတာပေ့ါ။ အခုအချိန်ကတော့ အဲဒီဖိနပ်တွေကို ဗီရိုထဲမှာထည့်သိမ်းရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီလေ။ ဘောလုံးဆိုတာက မင်းဘဝမှာ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဘဝသစ်တစ်ခုစတင်လျှောက်လှမ်းရဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတော့”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။